QEMU 5.1 dia tonga ary tonga miaraka amin'ny fanovana 2500 ary ireo no zava-dehibe indrindra | Avy amin'ny Linux
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny tetikasa QEMU 5.1, izay nanampiana ny mpanohana maro hafa, ary koa ny fanatsarana ny fanohanana ny NVMe, ny fanitsiana bibikely sy ny fanatsarana izay efa napetraka.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny QEMU dia tokony ho fantatr'izy ireo izany mamela anao mihazakazaka programa atambatra ho an'ny sehatra fitaovana ao anaty rafitra miaraka amina a maritrano samy hafa tanterakaOhatra, mihazakazaka fampiharana ARM amin'ny PC x86 mifanentana.
Amin'ny maody virtualization amin'ny QEMU, ny fahombiazan'ny kaody mihazakazaka eo amin'ny tontolon'ny boaty fasika dia manakaiky ny rafitra teratany noho ny fanatanterahana mivantana ny torolàlana momba ny CPU sy ny fampiasana ny Xen hypervisor na KVM module.
Ny tetikasa dia noforonin'i Fabrice Bellard tany am-boalohany mba hamelana ireo binari Linux voavoatra x86 hiasa amin'ny maritrano tsy x86.
Nandritra ny taona maro nisian'ny fampandrosoana, ny fanampiana ny fakana tahaka feno dia nampiana ho an'ny maritrano fampitaovana 14, ny isan'ny fitaovan'ny fitaovana nalaina tahaka dia nihoatra ny 400.
Zava-baovao lehibe an'ny QEMU 5.1
Amin'ny fanomanana an'ity kinova vaovao 5.1 ity, maherin'ny 2500 ny fanovana natao, ary mpiorina 235 no nandray anjara.
Amin'ireo fanovana lehibe misongadina amin'ity kinova vaovao ity dia hitantsika fa nampiana izy io fanohanana ny fanahafana ny CPU miorina amin'ny maritrano AVRary koa nanampy fanampiana ihany koa ho an'ny tabilao Arduino Duemilanove (ATmega168), Arduino Mega 2560 (ATmega2560), Arduino Mega (ATmega1280), ary Arduino UNO (ATmega328P).
Nasongadina ihany koa izany nanampy disonnect sy nvdimm ho an'ny rafitra vahiny ACPI amin'ny emulator ARM, Ho fanampin'izay, ny fanampiana napetraka dia nampiana ihany koa ho an'ny extension ARMv8.2 TTS2UXN sy ARMv8.5 MemTag
Nanampy fanampiana ho an'ny CPU Loongson 3A (R1 sy R4) mankany amin'ny emulator maritrano MIPS. Nanatsara ny zava-bitan'ny fanahafana ny torolàlana FPU sy MSA, ary koa ny fanohanana ireo CPU an'ny SiFive E34 sy Ibex mankany amin'ny emulator RISC-V. Nanampy fanampiana ho an'ny tabilao HiFive1 revB sy OpenTitan. Maherin'ny iray CPU no tohanan'ny milina Spike.
Ho an'ny mpanara-maso Ny NVMe dia manampy fanampiana ho an'ny faritra fahatsiarovana maharitra nampidirina tao amin'ny famaritana NVMe 1.4.
Ary koa misy baiko 'bitmap' vaovao nampiana ho an'ny qemu-img utilite hanodinana ny bitmaps maharitra amin'ny fisie qcow2.
Qemu-img koa dia mampihatra fitantanana manan-danja an'i LUKS (keyslot) ary manolotra fahaiza-manao fanampiny ho an'ny «map» baiko (–start-offset, –max-length) ary «convert» (–bitmaps), nampiana ny «refy» baiko miteraka vaovao amin'ny haben'ny bitmaps tsy miovaova amin'ny fisie qcow2.
Ny emulator PowerPC maritrano izao dia manana fanohanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rafi-panafody mampiasa FWNMI.
Ho an'ny maritrano s390, nanampy ny fanampiana KVM ho an'ny virtualization azo antoka (fomba fanatanterahana azo antoka).
Ny emulator an'ny x86 dia mampihena ny lohan'ny vahinin'ny Windows tsy tafiditra ao anaty fonosana amin'ny alàlan'ny fanomezana ny Windows ACPI Emulate Device Table (ACPI WAET). Fanatsarana fanatsarana ny haingam-pandeha HVF ho an'ny macOS.
Ny mpamily fitaovana block dia manampy ny fitaovana fitehirizana virtoaly misy sakana ara-batana sy lojika 2 MB.
Nanampy ny fahaizana mandefa tenimiafina sy fanalahidy ao amin'ny QEMU ho an'ny encryption amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny kernel Linux mampiasa karazana zava-miafina "key keyring" vaovao.
Ny algorithm famatrarana zstd dia manohana ny endrika qcow2 ankehitriny.
Ny birao sonorapass-bmc dia tohana.
Virtio ho an'ny vahiny miaraka amin'ny TCG mahazatra (Tiny Code Generator) dia manana fahaizana mampiasa ny fizotran'ny mpampiasa vhost, ao anatin'izany ny virtiofsd. Nanampy ny fanitarana VHOST_USER_PROTOCOL_F_CONFIGURE_MEM_SLOTS ho an'ny mpampiasa vhost, mamela ny fisoratana anarana mihoatra ny 8 RAM.
Nampidirina interface tsara handrindrana POWER style NMI
Manaraka ny TCG izao ny torolàlana scv sy rfscv
Azonao atao izao ny misafidy POWER10 amin'ny karazana «pseries»
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity kinova Qemu vaovao ity ianao dia azonao atao ny manamarina ireo andinindininy ao amin'ny famoahana voalohany. Ny rohy dia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » QEMU 5.1 dia eto ary miaraka amin'ny fanovana 2500 ary ireo no zava-dehibe indrindra
Nisy fanafihana voasoratra anarana tao amin'ny Tor izay nanandrana nanodinkodina ny fifamoivoizan'ny mpampiasa